IGolden Fold ayikakulungelanga ukwaziswa | I-Androidsis
IGolden Fold ayikakulungeli ukwaziswa
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo i-Samsung yaqala Yenza utshintsho kwiGolden Fold, ukuze ifowuni ibe ilungele ukwaziswa ekugqibeleni. Kwakungaziwa ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukugqiba olu tshintsho kwifowuni. Nangona kwiveki ephelileyo utshintsho olwenziwe yinkampani yaseKorea ufake isicelo kwisixhobo. Ukongeza, kwiingxelo kumajelo eendaba, i-CEO ichaze ukuba umhla wokukhutshwa kwesixhobo siza kubhengezwa kungekudala.
Kodwa kubonakala ngathi ngekhe kubenjalo, okoko i-Galaxy Fold ngoku inokuthatha ixesha elide ukuba ifike ezivenkileni. Iingxelo ezintsha zibanga ukuba isixhobo seSamsung asikakulungeli ukwaziswa kwintengiso. Ke kufuneka ulinde ithutyana. Utshintsho kusafuneka lusetyenziswe.
Iivenkile ezininzi zevenkile apho abasebenzisi bayigcinile iGolden Fold bayarhoxisa olo gcinelo. Yayisaziwa iiveki ukuba oku kunokwenzeka, kodwa oku kurhoxiswa ngoku kuqhelekile, kuchaphazela bonke abasebenzisi. Nokuba umsebenzisi uthe ufuna ukugcina lo bhukisho, kuyenzeka oku. Ke ngoko, oku kubonwa njengophawu lokuba Kusekho ixesha ide ifike ifown.
Asazi kwanto malunga nomhla wokukhutshwa. Ulwazi olufika veki nganye luyaphikisana. Ukusukela nje ukuba utshintsho olwenziwe kwifowuni lubhengezwe, sifumana ezi datha. Kutshanje, bekukho amarhe okuba iSamsung ibingekabi nawo umhla wokumiliselwa, into leyo umphathi wayo afuna ukuyikhanyela, esithi bazakuyibhengeza kungekudala.
Imbali iyaziphinda ngoku, kodwa kubonakala kucacile ukuba iGolden Fold ayikakulungeli ukubetha ezivenkileni ngalo mzuzu. Ukwakhiwa kwefowuni kuyinkimbinkimbi, okwenza ukwaziswa kokuphuculwa kungabi yinto elula yenkampani. Ngaphezulu kwako konke kuba abanakuyivumela ukuba iphazamiseke ifowuni okwesibini malunga noku. Iya kuba sisiphelo sesixhobo, ngaphambi kokuba ifike kwiivenkile kwihlabathi liphela.
Ke ngoko, kuya kufuneka silinde ithutyana ukuze sibone ukuba ekugqibeleni sazi ngakumbi malunga nokuqaliswa kweGold Fold. Sifumana idatha eninzi, nangona i-Samsung ingaqinisekisi nantoni na. Ke ngoko, sinethemba lokuba uya kusinika imikhondo malunga nokuqaliswa kwayo kungekudala. Ucinga ntoni ngezi ngxaki?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IGolden Fold ayikakulungeli ukwaziswa
I-KaiOS iseyeyona ndlela ifanelekileyo yokuya kwi-Android Go
I-Redmi 7A yaziswa ngokusemthethweni